तपाईलाई थाहा छ किन मानव, चिम्पान्जी र मुसालाई काउकुतीबाट रमाइलो लाग्छ ? » RealPati.com
“काउकुती विज्ञानको एउटा निकै फराकिलो अनि गहिरो विषय हो।”
यसै भन्छन् युनिभर्सिटी अफ म्यारील्याण्डका स्नायुवैज्ञानिक रोबर्ट प्रोभाइन। उनले आफ्नो विज्ञता बाडुली लाग्नु, हाइ काढ्नु तथा वायु जानु जस्ता व्यवहारको शोधमा खर्चिएका छन्। तर तीमध्ये काउकुती किन अझ विशेष छ?
छोटकरीमा भन्दा, काउकुती भनेको निकै गम्भीर विषय हो। “यो शरीरको रक्षा वा स्नायुप्रणालीमात्र होइन आफू र अरुबारेको होस वा चेतसँग पनि जोडिएको छ,” प्रोभाइन भन्छन्।
अन्य जटिल व्यवहार जस्तै काउकुतीबारे थप जान्न अरु पशुहरुले देखाउने व्यवहारले सघाउ पुर्याउँछ।
खासगरी काउकुती दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटालाई नीस्मेसिस भनिन्छ भने अर्कोलाई गार्गालेसिस भनिन्छ।
काउकुती नै एक यस्तो चुट्किला सरह हो जसले मानव र चिम्पान्जी दुवैका बच्चा हाँस्छन्
यसबारे युकेकी युनिभर्सिटी अफ पोर्ट्समथकी मनोवैज्ञानिक मरिना डाभिला रस सहमत छिन्। उनले चिम्पान्जीका हाँसोबारे अनुसन्धान गरेकी छन्।
चिडियाखानाका सञ्चालकहरु तथा आमाहरुलाई उनले क्रमश: चिम्पान्जीका बच्चा तथा मानव शिशुलाई काउकुती लगाउँदै दुई प्राणीबीच रहेको हाँसोको अध्ययन गरेकी छन्।
अरु पशुपनि हाँस्छन्?
मानव र बाँदर प्रजाति एक करोडदेखि एक करोड साठी लाख वर्ष पहिले छुट्टिएर बेग्ला बेग्लै विकसित हुन थाले। त्यसैले काउकुती-हाँसोको इतिहास पनि करिब त्यति नै वा अझ धेरै पुरानो हुनुपर्छ।
हात्तीले पनि एक अर्कालाई काउकुती लगाएको जस्तो देखिन्छ
यी कुराको बुझाइले मानव र पशुको सम्बन्ध जान्न मद्दत मिल्छ अनि मानव हुनुको महत्व के हो भन्ने पनि थप उजागर हुन्छ।